LEGO Adidas Superstar အတွက်အထူးလျှော့စျေးအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော့စျေးကုဒ်နှင့် LEGO 10282 Adidas Originals Superstar ၀ ယ်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 164 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 18 +, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်းစူပါစတား, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Jadlam, Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ, Lego, Lego Adidas, လူကြီးများအတွက် Lego, စျေးဝယ်
LEGO သည်လူကြီးများအတွက် LEGO ၀ ယ်ရန်အချိန်ကုန်နေပြီ 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား သုံးပြီး Brick Fanaticsအထူးလျှော့စျေးကုဒ်မှာ Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ.
LEGO Harry Potter 76388 Hogsmeade Village Visit အတွက်ငါတို့ရဲ့ယခင်သဘောတူညီချက်နဲ့ဒီနှစ်ရဲ့လျှော့စျေး 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်တနင်္လာနေ့တွင် ၂၄ နာရီသာရနိုင်သည်။ ဤဇာတ်လမ်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချိန်တွင် ၇၃၁ အပိုင်းအစကိုဖမ်းရန် ၆ နာရီသာလိုတော့သည်၊ ယခု ၁၅% လျှော့စျေးဖြင့်။
10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား အပြည့်စျေးဖြင့် ၇၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်လက်လီရောင်းချသော်လည်း၎င်းသည် LEGO.com နှင့် LEGO စတိုးဆိုင်များထက် ကျော်လွန်၍ ပထမဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ယခုစျေးလျှော့ဖွင့်သည်။ ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ BF154 တည်ဆောက်။ ရသောဖိနပ်၏စျေးကို£ ၆၇.၉၅ သို့ချရန် checkout တွင်
သဘောတူညီချက်ကိုချောမွေ့စေရန် Jadlam တွင်နောင် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်သုံးစွဲရန်သစ္စာရှိအမှတ်များအတွက်နောက်ထပ် ၅% ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သည့်အတိုင်းတိုက်ရိုက်စားသုံးသူအစုံအတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏမမြင်ရပါ 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတားဒါကြောင့်ဒီဖိနပ်ကိုခဏလောက်ကောက်တာကမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလောင်းကစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာနည်းပြကိုကျော်ပြီးခြံစည်းရိုးမှာရှိနေရင်ဒါဟာသေချာပေါက်ထွက်သွားမှာပါ LEGO Groupပုံမှန်ဘီးတပ်အိမ် - ထွက်စစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကြောင့်သင်အံ့သြသွားရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြသည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတားမရ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အချို့ရှိသည် အလွန်အေးမြသောထုပ်ပိုးမှု...
ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ယနေ့ည ၁၁ နာရီ ၅၉ နာရီ UK တွင်သင်ရှိသည်။ ဝယ်ယူခြင်း 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား မှ Jadlam ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော့စျေးကုဒ်ကို သုံး၍ ၎င်းကိုကူညီပံ့ပိုးလိမ့်မည် Brick Fanatics မင်းကိုပိုပြီးသီးသန့်အပေးအယူတွေအပါအ ၀ င်လုပ်ပေးတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← Classic LEGO minifigures များသည် A ပေါ်တွင်ရှိသည် city၂၀၂၂ အတွက်ဘတ်ဂျက်
LEGO Builder's Journey သည်စတူဒီယိုမှဒုတိယမြောက်ဂိမ်းကိုဖိအားပေးသည် →